पेटिसन फायल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७४-११-९ बिचार / प्रतिक्रिया
हाल मेरो इमिग्रेसन स्टाटस ग्रीनकार्ड होल्डर छ । मैले गत महिना मेरो श्रीमती (जो बी–२ भिजिटर भिसामा छिन्)का लागि आई–१३० पेटिसन फायल गरेको थिएँ । उनको पहिलो श्रीमान्बाट १५ वर्षको एक छोरा नेपालमा छ । जसका लागि मेरो श्रीमतीले ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेपछि कुनै इमिग्रेसन बेनिफिट वा पेटिसन फायल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला ? जबाफ पाए आभारी हुने थिएँ ।
– रवि, मासपेथ, न्यूयोर्क
रविजी, अमेरिकाको इमिग्रेसन ल अनुसार जसरी युएस सिटिजनहरुले आफ्नो छोरा वा छोरीहरु (नाबालक, २१ वर्षभन्दा मुनि)लाई ग्रीनकार्डका लागि भिसा पेटिसन फायल गर्न पाउँछन्, त्यसरी नै ग्रीनकार्ड होल्डर वा लिगल परमानेन्ट रेसिडेन्ट (एलपीआर) बाबुआमाले पनि २१ वर्षमुनिका बच्चाहरुलाई ग्रीनकार्डका लागि भिसा पेटिसन युएससीआईएसमा पेश गर्न सक्नेछन् । फरक यति मात्र हो कि युएस सिटिजनका छोरा–छोरीहरु इमेडियट रिलेटिभ भएकाले भिसाका लागि पालो कुर्नु पर्दैन भने एलपीआरका नाबालक छोराछोरीहरुले भिसाका लागि पलो पर्खनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् एलपीआरको पेटिसनहरु प्रिफरेन्स क्याटगोरीमा पर्न गएकाले भिसाको कोटा पर्खनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी अध्यागमन कानूनअन्तर्गत आफ्नो रगतको छोराछोरीहरुबाहेक स्टेप–चिल्ड्रेनहरुलाई पनि पेटिसन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्टेप–चिल्ड्रेनलाई पेटिसन फायल गर्ने हकमा उक्त स्टेप–रिलेसनसिप कायम गरेको बखतमा उक्त नाबालकको उमेर १८ वा सोभन्दा कम रहेको हुनुपर्नेछ ।
तपाईंको केसमा तपाईंको वस्तुस्थिति हेर्दा तपाईंको श्रीमतीको छोरा अहिले १५ वर्ष मात्र भएकाले तपाईं आफैंले पनि स्टेप–फादरको हैसियतले पेटिसन पेश गर्न सक्नुहुनेछ । अर्को अवस्थामा तपाईंको श्रीमतीले ग्रीनकार्ड पाएपछि उहाँ आफैंले पनि सो नाबलकका लागि पेटिसन पेश गर्न सक्नुहुनेछ । तर, ध्यान पु¥याउनुपर्ने कुरा के हो भने सो बालकको उमेर २१ वर्ष पुग्नुअगावै ग्रीनकार्ड प्राप्त गरी अमेरिका प्रवेश गरेको हुनुपर्नेछ ।
तपाईंले भिसा पेटिसन फायल गर्दाको हकमा तपाईं र तपाईंको श्रीमतीको विवाह साँचो वा सही हो भन्ने तथ्यलाई पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।